Uyilo lweKhosi yoyilo kusetyenziswa ulwakhiwo lweRobot ye-AutoDesk -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Uyilo lweKhosi yoyilo kusetyenziswa ulwakhiwo lweRobhothi oluZenzekelayo
Isikhokelo esipheleleyo sokusetyenziswa kohlalutyo lweRobhothi ukulungiselela imodeli, ukubala kunye nokuyilwa kwekhonkrithi kunye nezakhiwo zensimbi
Le khosi iya kugubungela ukusetyenziswa kwenkqubo yoPhando lweeRobhothi zoPhononongo lweModeli, ukubala kunye noyilo lwezinto ezakhiweyo kwizakhiwo zekhonkrithi eziqinisiweyo kunye nezakhiwo zentsimbi.
Kwikhondo elijolise ekuyileni abayili, iinjineli zakwarhulumente kunye nabachwephesha kule ndawo abanqwenela ukuba nzulu basebenzise iRobhoti ukubala izakhiwo zakwarhulumente ngokwemigaqo eyamkelweyo kwihlabathi liphela nangolwimi abalukhethayo.
Siza kuthetha ngezixhobo zokudalwa zesakhiwo (iibhule, iikholamu, isaladi, udonga, phakathi kwabanye). Siza kubona indlela yokwenza ubalo lweemeko ezihamba modal kunye ne-seismic, kunye nokusetyenziswa kwemigangatho esetyenziswayo kwimithwalo ye-seismic kunye ne-spectra yoyilo lwesiko. Siza kufunda ngokubanzi ukuhamba komsebenzi ukulungiselela uyilo lwezinto eziqinisiweyo zekhonkrithi, ukuqinisekisa isixhobo esifunekayo ngokubala kwiikholamu, iibhulethi kunye nakumgangatho womgangatho. Kwangokunjalo siza kujonga kufutshane kwizixhobo ezinamandla zeRSA zokuchaza izinto ezenziwe ngobumbeko zekhonkrithi eziqinisiweyo ngokukodwa okanye zidibene. Siza kuqwalasela kwakhona indlela yokwazisa ngeparamitha eqhelekileyo kwiinkqubo ezichaziweyo kunye nokubekwa kwesinyithi sokomelela kweekholamu, imigangatho, i-slabs, iindonga kunye neziseko ezingqalileyo ezibekwe zodwa, zidibene okanye ziqhutywa.
Kule khosi uya kufunda ukusebenzisa izixhobo ze-RSA kuyilo lonxibelelaniso lwensimbi, ukudala umbono wokujonga, ukuvelisa amanqaku okubala kunye neziphumo ngokwemigangatho yamazwe.
Le khosi icwangciselwe ukuba igqitywe malunga neveki, sinikezela malunga neeyure ezimbini ngosuku ukuze kufezekiswe imisebenzi esiya kuyiphuhlisa kunye ngalo lonke ixesha lesifundo, kodwa ungahamba ngesantya oziva ukhululekile.
Kwisifundo sonke siya kuphuhlisa imizekelo emibini ebonakalayo eya kusinceda kwimeko nganye ukubona imodeli kunye nezixhobo zoyilo zekhonkrithi kunye nezakhiwo zentsimbi ngokulandelelana.
Ukuba ubhalisela le khosi, siyakuqinisekisa ukuba uya kusebenza ngakumbi kwaye ucace xa usenza iiprojekthi zokwakha, kunye nokungena ekusebenziseni isixhobo esiliyilo esinempawu ezininzi, kuba sinobungcali kwaye sisebenza ngokukuko.
Imodeli kunye noyilo oluqinisiweyo ikhonkrithi kunye nezakhiwo zentsimbi eRSA
Yenza imodeli yejometri kwinkqubo
Yenza imodeli yohlalutyo lwesakhiwo
Dala ukuqiniswa kwensimbi
Bala kwaye uyile uqhagamshelo lwensimbi ngokwemigaqo
Kuya kufuneka sele uqhelene nemiba yobuncinci bebalo lobalo
Kucetyiswa ukuba inkqubo ifakiwe okanye ukusilela ukufaka uvavanyo lwalo
Le khosi ye-RSA ijolise kubaqulunqi bezakhiwo, iinjineli zaseburhulumenteni kunye nabani na onxulumene nokubalwa kunye noyilo lwezixhobo